အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကို နှစ်ပါတီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဟု မွန်နှစ်ပါတီပူးတွဲကြေညာ - Yangon Media Group
အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကို နှစ်ပါတီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဟု မွန်နှစ်ပါတီပူးတွဲကြေညာ
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃-အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကို နှစ်ပါတီပူးပေါင်းဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မွန်အမျိုးသားပါတီနှင့် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီတို့က နှစ်ပါတီပူးတွဲကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် ရက်စွဲဖြင့် မွန်ပါတီနှစ်ရပ်က ပူးတွဲထုတ်ပြန် ချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်ပါတီထိပ်သီးခေါင်းဆောင် များတွေ့ဆုံမှုအပြီး ယင်းသို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”တွေ့ဆုံမှုအပြီး သဘောတူညီမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ မွန်လူမျိုး၊ ဒေသနဲ့နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက် နှစ်ပါတီပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားကြမယ်။ (၂၁) ရာစုပင်လုံညီလာခံရဲ့ အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံ ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ဆွေးနွေးကြမယ် ပေါ့”ဟု မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌနိုင်ချမ်းတွဲ့ က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်က ပြောသည်။
မွန်ပါတီနှစ်ရပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ကိုယ်စားလှယ် ချင်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှု သုံးကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကာ၊ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်တွင် မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိင်မြို့၊ ပိုင်ခေတ်ခန်းမတွင် မွန်အမျိုးသားပါတီ မှ နိုင်တလနွန်ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့နှင့် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမို ကရေစီပါတီမှ ဒုဥက္ကဋ္ဌနိုင်ချမ်းတွဲ့ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ယင်းသို့တွေ့ဆုံမှုမှ သဘောတူညီချက် ခုနစ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီး သဘောတူညီချက်များမှာ နှစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်သုံးဦးစီ တစ်လ တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံသွားရန်နှင့် ထူးခြားအကြောင်းအရာများရှိက ပါတီချင်း ဆက်သွယ်တွေ့ဆုံသွားရန်၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးနှင့်ပတ် သက်၍ နှစ်ပါတီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်ပါတီ ပေါင်းစည်းရေးအတွက် အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို ဆက် လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိသည်။
ထို့အပြင် နှစ်ဖက်ပါတီဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို ညှိနှိုင်းနိုင်ရန် အတွက် လဲလှယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ (၇၁) ကြိမ်မြောက်မွန်အမျိုးသား နေ့အတွက် နှစ်ပါတီပူးပေါင်းပြီး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ (၂၁)ရာစု ပင်လုံညီလာခံနှင့်ပတ်သက်၍ လူမျိုးအ လိုက် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို နှစ်ပါတီပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆက်လက်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မွန်ပြည် သူ့ညီလာခံနှင့်ပတ်သက်၍ ပါတီအလိုက် အသီးသီးသဘောထား ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပန်းတောင်းမြို့နယ်တွင် ဟီးနိုးယာဉ်တစ်စီး ချောက်ထဲထိုးကျ၊ ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် နှစ်ဦးသေဆုံ??
ဘူးသီးတောင်တွင် မိုင်းပေါက်ကွဲမှုအပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်
လီဗာပူးနှင့် မန်စီးတီး အသင်းတို့တွင် ကစားပါက ပေါ့ဘာ ထိပ်တန်း ကစားသမားဖြစ်နိုင်ဟု အိုဝင် သံ?
အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် ဥရောပနိုင်ငံတချို့အား ပြည်ဝင်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်နေ